Ny Nosy La Réunion dia mandroso miaraka amin'ny fizahan-tany fitsangantsanganana
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Ny Nosy La Réunion dia mandroso miaraka amin'ny fizahan-tany fitsangantsanganana
Noraisin'ny Nosy Réunion tamin'ny herinandro lasa teo ireo sambo fitsangantsanganana Queen Elizabeth sy THE WORLD. I Azeddine Bouali, ny Lehiben'ny La Réunion Cruise, no nanatrika teo mba hiantohana ny fandraisana sy ny fiasan'ny mpandeha marobe.
Ile Reunion fizahan-tany sy ireo biraon'ny fizahan-tany isam-paritra dia teo an-tànana rehetra mba hiantohana ny fomba itsinjaram-pahefana mba hifanaraka tsara amin'ireo mpandeha sambo fitsangantsanganana marobe. Nosy La Réunion toa ny firenena mpikambana ao amin'ny Nosy Indianina Vanilla Islands dia nahita fitomboan'ny sambo fitsangantsanganana an-tseranana. Pascal Viroleau, tale jeneralin'ny nosy Vanilla dia nilaza fa tantaram-pahombiazana isam-paritra ny fitomboan'ny asa sambo sambo.
Didier Robert, ny filohan'ny Réunion Région no nitarika ny varotra ny Nosy Vanilla ho an'ny orinasan'ny Cruise Ship. Mino izy fa ny fijanonan'ireo mpandeha sambo fitsangatsanganana dia fomba azo antoka hivoahana ireo mpandeha ihany mandritra ny fialantsasatra raha mankafy ny tsiro voalohany amin'ilay nosy izy ireo.
Mpamatsy vola Espaniôla ao anaty sambo miaraka amin'ny tetika fampiofanana sy fisotroan-dronono any Jamaika
Southwest Airlines dia nanambara ny fanovana nataon'ny mpitarika